tenderera - ALinks
Zvinyorwa pamusoro pekutenderera
Dai 2, 2022 Demi Korombiya, tenderera
Kufamba mumugwagwa ndiyo nzira huru yekufambisa; 69 muzana yezvinhu zvinotakurwa nemugwagwa, zvichienzaniswa ne27 muzana nenjanji, 3 muzana nenzira dzomumvura dzomukati, uye 1 muzana nendege. Zvekufambisa muColombia Izvi ndizvo zvakanyanya
January 9, 2022 Demi tenderera, Pakisitani
Kufambisa muPakistan kwakakura uye kwakasiyana, asi ichiri mumatanho ayo ekukura. Inoshandira huwandu hwevanhu vanopfuura mamirioni mazana maviri. Iyo yekufambisa network muPakistan ine migwagwa mikuru, njanji, chiteshi, veruzhinji kutakura, uye kutumira mabasa Zvinenge
Ungawana sei vhiza yeTurkey kubva kuSouth Africa?
August 4, 2021 Demi Africa, tenderera, Teki, visa
Unogona kuwana vhiza kubva kuSouth Africa kuenda kuTurkey pamasuo emuganhu weTurkey (inozivikanwawo seVisa paKusvika). Vanhu vanobva kuSouth Africa vanogona kuwana e-Visa online online kuTurkey Visa Application System. Chero ani achienda kuTurkey
Uganda Transport, Kufamba sei mu Uganda
June 6, 2020 Demi tenderera, Uganda
Kutenderera muUganda kuri nyore, nekukurumidza uye kuri nyore. Ugandan yeruzhinji uye yakavanzika nzira dzekufambisa dzinogona kusvika nenzvimbo dzese dzenyika. Nyika yakavharwa. Asi zvakadaro, kufambisa kwakanaka. Uganda yakanyatsobatana nepedyo
Want To Travel UK ?? Shandisa Izvi Zvifambiso muUK!
Dai 20, 2020 Demi tenderera, UK
Kufambisa muUK Migwagwa nemigwagwa ndiyo nzira dzeBritain dzekufambisa dzimba. Kune makiromita mazana maviri nemakumi maviri nemaviri emigwagwa muBritain. Kufamba nemotokari, van kana tekisi ndiyo nzira yakajairika yekufambisa, accounting
Ndeupi Rudzi rwekufambisa Iwe Unogona Kuwana muChina?
Dai 20, 2020 Demi China, tenderera
China yekufambisa hurongwa hwave nani kubva muna 1949. Nhasi China ine netiweki yakawanda yendege, zvitima, migwagwa mikuru, nzira dzepasi pevhu, zviteshi, uye nzira dzemvura. Pakati payo, njanji dzinomhanya-mhanya, migwagwa mikuru, uye dzakawanda subways nyowani zvakavandudza zvakanyanya hupenyu hwezuva nezuva hwevanhu vemuno.
Ongorora France, neiyo Yakanyanya Yekufambisa
Dai 19, 2020 Shubham Sharma Furanzi, tenderera, famba
Kufambisa muFrance kunoshamisa uye zvakare zvakanakisa muEurope. Iyo mugwagwa network muFrance ndiyo inonyanya kushandiswa uye imwe yemagetsi densest munyika zvakare. Paris yakarongedzwa sechipakati uye dandemutande rekutakura
Kuwana Pota neItari: Matipi Ekufambisa !!
Dai 18, 2020 Demi tenderera, Itari
Chikamu chakakosha chegadziriro yezororo rako reItari mafambiro aunoita uye, zvakanyanya, maitiro aunozviita nezvazvo. Kunzwisisa kwako kwemazuva ese muItari kwakasarudzika nerwendo rwako. Imwe yedzinodhura dzimwe nzira dzinogona kuve zvitima. Kurenda
Yakanyanya Inoshandiswa Nzira dzekutakura MuRussia
Dai 17, 2020 Demi tenderera, Rashiya, famba
Russia inyika yakakura ine nhambwe huru, asi kunyangwe kana iri yekutanga kushanya kuRussia, kusvika kwauri kuenda uri wega hazvina kuoma. Chinhu chikuru kuronga nzira yako, sekunge kune chero nzvimbo dzisingazivikanwe